स्वास्थ्य पेज » आजदेखि देशभर भेरोसेल खोप वितरण हुँदा बाँकेमा कहिले हुन्छ ? आजदेखि देशभर भेरोसेल खोप वितरण हुँदा बाँकेमा कहिले हुन्छ ? – स्वास्थ्य पेज
आजदेखि देशभर भेरोसेल खोप वितरण हुँदा बाँकेमा कहिले हुन्छ ?
नेपालगन्जः सरकारले आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण गर्दैछ । बाँकेमा भने कहिले खोप लगाउने भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप अधिकृत भेषराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । चीनबाट खरिद गरी ल्याएको ४० लाख डोज कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप देशैभर वितरण गर्न लागिएको हो । यसका लागि ठाउँ अनुसार लक्षित समूहको वर्गीकरण गरिएको छ ।